Iindaba Ezixhamlayo | Isiseko soMvuzo - Uthando loThabano kunye ne-Intanethi
Iindaba ezinomvuzo yincwadana enika ulwazi malunga nomsebenzi weSiseko soMvuzo -Uthando, isini kunye ne-Intanethi. Sayina apha ngezantsi ukuze ikopi yakho ithunyelwe kwibhokisi yakho engenayo.
Ezi zilandelayo zikhoyo zikhoyo:
Hayi. Ukuqinisekiswa kobudala obuyi-10 kunye neNgqungquthela yeHlabathi ekhethekileyo (Julayi 2020)
Hayi. IiNdaba ze-Autumn ze-8
Ukuba unombali ongathanda ukusibona, sicela usilahle inqaku info@rewardfoundation.org.